ओली आफू पनि करेक्सन हुने ठाउँमा नपुग्दासम्म पार्टी एकढिक्का हुँदैन | Everest Times UK
ओली आफू पनि करेक्सन हुने ठाउँमा नपुग्दासम्म पार्टी एकढिक्का हुँदैन
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरणपछि बनेको नेकपा सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ को फैसलाले पुन: पुरानै अवस्थामा फर्काएपछि एमालेमा चर्को विवाद चलिरहेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको असहमतिकाबीच पार्टी कमिटीमा गरेका फेरबदललाई मानेर जानुपर्ने अडान कायम राख्नु भएको छ भने नेता नेपाल पक्ष अदालतको फैसलाअनुसार २०७५ जेठ २ गतेको संरचना र अवस्थाबाट अगाडि बढ्नु पर्नेमा अडिग देखिएको छ । दुई समूहलाई एकीकृत गर्न ओली र नेपालले १० सदस्यीय कार्यदल बनाएर १० बुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार पारे पनि एमालेले मिलनविन्दु भेट्टाएको छैन । बरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने दिन आइतबारसम्म आउँदा एमालेमा विवाद चर्किएको र ओली पक्ष कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ ।
माधव नेपाल समूहका एक दर्जनभन्दा बढी सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिए । पहिले नेपाल समूह लागेका केही सांसदले मतदान बहिष्कार गरे । तर ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेहरुकाहरुले समेत देउवालई विश्वासको मत दिए । यसले एमालेको एकता झन् जटिल बन्दै गएको विश्लेषण गरिन थालेको छ । सरकारमा एमालेको सहभागिताजस्ता समसामयिक विषयमा केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित (नेपाल पक्ष) का सांसद मेटमणि चौधरीसँग गरिएको कुराकानी ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा यहाँहरुले मतदान गर्नुभयो, अब सरकारमा सहभागी जानु हुन्छ ?
हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं । हामी किन सहभागी बन्नु पर्‍यो भन्दा अहिले यो देउवाको सरकार होइन । यो सबैको सरकार हो । केपी ओलीले संविधान मिच्ने, सिस्टम खारेजी गर्ने तयारी गरिराथ्यो नि ! निरंकुश शासक बन्ने सपना देखिराथे । पटक-पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने, पूरा अवधि चल्न नदिने, त्यसको विरुद्धमा न हो । त्यसकारणले देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारको कन्सेप्टमा अगाडि बढ्ने । एउटालाई प्रधानमन्त्री त बनाउनै पर्‍यो । कांग्रेस वा देउवाको सरकारभन्दा पनि यो संयुक्त सरकार हो । त्यसको नेतृत्व देउवाले गर्नुभएको छ । हाम्रो पूरै सहभागी रहन्छ ।
हामी नजानेबित्तिकै सरकार कांग्रेस र माओवादीको मात्रै छ भन्ने लाग्न सक्छ । राम्रो रेस्पोन्स जनतारबाट आउन सक्दैन । फेरि अप्ठेरोमा पर्न सक्छ सरकार । यो सरकार र प्रतिनिधिसभा पनि पूरा अवधि चलाउनका लागि हामी सामेल हुन्छौं । प्रतिनिधिसभा पूरा अवधि चल्नु भनेको संविधानको जुन कल्पना छ, सरकार ५ वर्ष चल्नु हो । त्यसको सम्मान हुने भयो । र, चुनावमा जाने कुरा रोकिने भयो । एकखालको स्थायित्वको म्यासेज दिने भयो । त्यसका लागि हामी सहभागी हुन्छौं ।
सरकारमा यहाँहरुले कति मन्त्रालय माग्नुभएको छ ?
त्यो विषयमा कुरा टुंगिसकेको छैन ।
सरकारमा कुन नेताको नेतृत्वमा जाँदै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो विचार समूहका नेता भनेको माधव नेपाल हुनुहुन्छ । उहाँले लेखेर दिएपछि गठबन्धनसँग छलफल होला । सिनियर लिडरको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने कुरा छ । वामदेव कमरेडले नि नेतृत्व गरेर सरकारमा जान चासो राख्नु भएको छ । तर उहाँको गुडवील छैन । सिनियरहरु योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेहरु नजाने, टप सिनियरहरुको इमेज बिग्रिएको । त्यसैले हामीमध्येमा कसैलाई पठाउलान् ।
तपाईंहरुको समूहबाट सांसद भीबहादुर रावलले राजीनामा दिनुभयो । उहाँको राजीनामाको कारण सरकारमा कसले नेतृत्व गरेर जाने भन्ने विषयमा अन्तरनिहीत रहेको भनिन्छ । त्यस्तो हो ?
खासमा भीमबहादुर कमरेडको व्यक्तिगत चरित्रको कुरा हो । उहाँको मनमा पाप छैन । जे देख्नुहुन्छ, त्यो बोल्नु हुन्छ । जे मन लाग्छ, त्यो गर्नु हुन्छ । उहाँको त्यो प्रमुख विशेषता हो । पछिल्लो विषय के हो भने, जे गरे पनि नमान्ने अवस्था केपी ओलीको । यता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई उहाँले कार्यदलको संयोजक बनाउनुभयो । अनि हरेक प्रयास गर्दा पनि ओलीले ठाडै अस्वीकार गर्ने । त्यसपछि पार्टी मिलाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भा हो जस्तो लाग्छ । पार्टी मिलाउने जिम्मा पाउने अनि मिलाउन नसक्ने भएपछि उहाँले आफ्नो नैतिकतासँग जोडेर राजीनामा दिनुभएको हुनसक्छ ।
नेपाल पक्षबाट सरकारको नेतृत्व गर्न एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले चाहना देखाएपछि रावल बिच्कनुभएको भन्ने छ त ?
त्यस्तो होइन होला । वामदेवजीलाई पठाउने कि नपठाउने भन्ने टुंगो छैन । यो विषयमा होइन । खास पार्टी मिल्न नसक्ने र टप नेता जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ ‘सिरिएस’ नभएकोले राजीनामा दिनुभयो उहाँले ।
नेता नेपालसँग पनि नेता रावलको असन्तुष्टि हो र ?
नेता नेपालसँग त के असन्तुष्टि होला र । उहाँ (रावल)जीले यसो गरौं भन्नु भएको थियो होला । माधव कमरेडले एकखालको दृष्टिकोण बनाइसक्नु भएको छ । त्यसो हुँदा उहाँलाई त्यो पनि थोरै होला । मुख्य कुरा ओलीसँगै हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने त ओली पक्षकाबाट सांसदहरु पनि देखिनुभयो, यहाँहरुसँग कुराकानी भएर कि मन्त्रीको लोभमा ?
उहाँहरु मन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे हो । प्रेम आले मान्य मन्त्री भइसकेको । दानबहादुर बुढा मन्त्री भइसकेको । मन्त्रीको कुनै लोभ होइन । किसान मान्य दाइ आफैंमा सोझो मान्छे । त्यो भन्दा पनि ओलीको जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको विरुद्धमा उहाँहरुले विद्रोह गर्नुभयो । अब ओलीसँग केही मान्छे मात्रै बाँकी रहला ।
यहाँहरु सरकारमा जानेवित्तिकै त एमाले फुटेको पक्का हुन्छ हैन ?
यही हुन्छ भन्ने त हुँदैन । छलफल, बहस गर्दै जाँदा अनेक चिज हुन्छ । खासमा नेकपा (एमाले) पार्टी छैन । एमाले हुनलाई २०७५ जेठ २ गते फर्किनुपर्छ । त्यसबेलाको २ सय ५ जनाको केन्द्रीय समिति । सर्वोच्च अदालतको पनि त्यो सन्देश छ । त्यस अवस्थामा ओली छैनन् । हामी छौं । ओली त माओवादीबाट आएका, २०७८ जेठ ३ गते थपेका केन्द्रीय सदस्यहरु लिएर अगाडि बढेका छन् त । त्यसकारणले हामी सरकारमा जाँदैमा पार्टीमा अप्ठेरोको कुरा आउँदैन । एमाले हुन हामी त्यो ठाउँमा फर्किनु पर्छ, तर ओली तयार हुँदैनन् । कि त हामीले संसदीय दलबाट उनलाई हटाउनु पर्‍यो । त्यो सम्भावना छैन । पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउनु पर्‍यो, त्यो सम्भावना छैन । सबै खालको सम्भावना नभएपछि ओली आफू पनि करेक्सन हुने ठाउँमा नपुग्दासम्म पार्टी एकढिक्का हुँदैन । अब हाम्रो योजना ओलीलाई छोड्ने र नेपालमा भएका सबै खालका कम्युनिस्टहरुबीच एकता गर्ने । उपेन्द्र यादवसमेतलाई पार्टी एकतामा सामेल गराउने र मुलुकमा लार्जेस्ट पार्टीका रुपमा स्थापित गर्ने । कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाइराख्ने । ठूलो वा सिनियर पार्टी बनायौं भने त कम्युनिस्टहरु जोगिने भयो । त्यो ठाउँबाट पनि हामीले सोच्दै छौं ।
यदि ओलीले करेक्सन हुने भए भने हामी फेरि पनि एमालेमा रहने । त्यसपछि एमालेलाई ठूलो पार्टी बनाउने र कम्युनिस्ट एकताका लागि प्रक्रिया अगाडि बनाउने हाम्रो रोडम्याप हो ।
नेपाली मेला सबैको हो, आइदिनुहोस्, सफल बनाइदिनुहोस् : संयोजक हरि गुरुङ
विकास पहुँचको आधारमा होइन, आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्छ : सांसद हितबहादुर तामाङ
बेलायतबाट हामीले नेपाल पठाएको राहत सामग्री मिसयुज हुँदैन भन्‍ने ठूलो विश्वास छ : पुनम गुरुङ [अन्तर्वार्ता]